Ibsa ejjanoo Baale: Nafxanyaa fi Doorzeerraa hin binnu, itti hin gurgurru | Oromia Shall be Free
Ibsa ejjanoo Baale: Nafxanyaa fi Doorzeerraa hin binnu, itti hin gurgurru
bilisummaa October 26, 2019	Comments Off on Ibsa ejjanoo Baale: Nafxanyaa fi Doorzeerraa hin binnu, itti hin gurgurru
Ibsa Ijjannoo Baalee
Ibsi kun Nafxanyaa fi Doorzee (Walaayitaa Walaamoo) ilaallata
1.Dinagdee:Nafxanyaa fi Doorzeerraa hin binnu, itti hin gurgurru
2, Mana jireenyaa hin itti hin kireessinu, irraa hin kireeffannu, yoo kireeffamee argame manichi ni gubama
3, lafa manaa itti hin gurgurru, yoo isaan qabaatanis irraa hin binnu
4, baabura midhaanii, jeejjiba isaanii, Mana nyaataa fi wanta biroo kkf qabeenyummaan kan isaanii ta’anitti hin fayyadamnu, isaanis keenyaatti hin fayyadaman
5.,Hiriirri nu goone Jawaar Muhammadiifi sagalee ta’uuf baanemalee Amantaaf ta’uu dhiisuu beeksisuu barbaanna
6,namoonni Kalee lubbuu ijoollee teenyaa baasan (hojjattoonni Mootummaaa -Poolisiin Oromiyaa) atattamaan akka gaafataman ni gaafanna!
7.obboleeyyan keenya Maccaaf tuulamaa kan diinni keenya fajaajessee, shawaa irraa isin buqqisee nutti baqattannii dhiiga keenya waan taataniif isin qubsiifne, amma amantaa fakkeessee maqaa amantaatiin isin sobee gaachana isin godhachaa jiru, sobamtanii isaan wajjiin nu ajjeesuu irraa deebitanii, akka Oromummaa teessan beektanii akka Luba Balaay Mokonnin sanatti oromoof akka nu wajjiin Qapsooftan kabajaan isin gaafaanna!
8. Oromoo taatee Mana shubbisaa Nafxanyaa kan seenu Inniyyuu nafxanyaadha tarkaanfiin irratti fudhatama!
9.Namoonni meeshaa adda addaa karaa irratti gurguran kaleessa nu ajjeesaa Waan turaniif Tarkaanfiin isaan irratti fudhatama!
10. 15-2-2012 irraa qabee hojiirra oolfama
11.Ibsi kun Aanaawwan Godinni baalee qabdu Hundumayyuu ilaallata! Isbichi kan baafame Jaarsotaa fi Qeerroo Baaleetiini
Akeekkachiisa:Oromoo ta’ee ibsa kana hojiirra kan hin oilchine, yoo dhukkubsate hin gaafannu, yoo Rakkate rakkoo hin baasnu, yoo ibiddi itti qabate irraa hin dhaamsinu… Inumaa Tarkaanfiin isaa fi qabeenya isaa irratti kan fudhatamu ta’a, kana qofa miti abaarsatus duubaan jira, ni abaaramta!
Ookkara kana kan uume Nafxanyaa fi Doorzee waan ta’eef Tarkaanfiin kun hunduu isaan qofaaf hojiirra ooluu qaba!
Yoo warri isaaniin alaas ookkara uumuuf jedhan isaaniifis hojiirra kan oolu ta’a! Ummanni baalee Nafxanyaa fi Doorzee dhaan araarama tokkollee hin qabnu!
#share godhaa #Save godhaa
15-2-2012 #Roobee Baalee
Previous Taayyee Danda’a osoo ati osoo dhugaa fi ummata Oromootiifi dhaabbattee …..
Next Ministarri mummee nafxanyaa ergaa dabarsan